Izindaba - U-Ailika Wethula Inkambu Yesicelo Se-Solar Power Generation
1. Amandla elanga kubasebenzisi: imithombo yamandla emincane esukela ku-10-100w isetshenziselwa ukusetshenziswa kwamandla nsuku zonke ezindaweni ezikude ezingenawo amandla, njengamathafa, iziqhingi, izindawo zokwelusa, imingcele kanye nokunye ukuphila kwezempi nezakhamuzi, njengokukhanyisa. , i-TV, irekhoda yomsakazo, njll.;3-5kw uhlelo lokuphehla amandla ophahleni lomndeni oluxhumeke kugridi;Ipompo yamanzi e-Photovoltaic: ukuphuza nokunisela amanzi ajulile Imithombo ezindaweni ezingenawo ugesi.
2. Ezokuthutha: njengamalambu okuzulazula, amalambu ethrafikhi/kaloliwe, isixwayiso sethrafikhi/amalambu ezimpawu, amalambu asemgwaqweni, amalambu okuvimbela ukuphakama okuphezulu, amadokodo ocingo angenazintambo kumzila wesitimela/umzila wesitimela, ugesi ongagadwanga wokushintsha umgwaqo, njll.
3. Inkundla yezokuxhumana/yezokuxhumana: isiteshi samandla elanga esingagadiwe se-microwave, isiteshi sokulungisa ikhebula elikhanyayo, uhlelo lwamandla okusakaza/ukuxhumana/ukupheja;Isistimu ye-photovoltaic yocingo ye-Rural carrier, umshini omncane wokuxhumana, amasosha amandla e-GPS.
4. I-Petroleum, ulwandle kanye ne-meteorology: isistimu yamandla elanga yokuvikela i-cathodic yepayipi likawoyela kanye nesango le-reservoir, ukunikezwa kwamandla okuphuthumayo kwasekhaya kanye nezimo eziphuthumayo zeplathifomu yokumba uwoyela, okokusebenza kokubona ulwandle, okokusebenza kokubona isimo sezulu/i-hydrological, njll.
5. Ukunikezwa kwamandla kagesi ezibani zasekhaya: njengelambu lasegcekeni, ilambu lomgwaqo, ilambu lesandla, isibani sokukhempa, isibani sezintaba, isibani sokudoba, isibani esimnyama, isibani sokusika iglue, isibani esonga amandla, njll.
6. Isiteshi samandla e-Photovoltaic: Isiteshi samandla esizimele se-photovoltaic esingu-10kw-50mw, isiteshi sikagesi esihambisana ne-wind-solar (i-diesel), iziteshi zokushaja ezinkulu ezihlukahlukene zokupaka, njll.
7. I-Solar Architecture: ukuhlanganisa ukukhiqizwa kwamandla elanga nezinto zokwakha ukwenza izakhiwo zesikhathi esizayo ezinkulu zifinyelele ukuzimela ngogesi kuyisiqondiso esikhulu sokuthuthukiswa esikhathini esizayo.
8. Eminye imikhakha ihlanganisa: ukufanisa nemoto: imoto yelanga/imoto kagesi, izinto zokushaja amabhethri, isiphephetha-moya semoto, ifeni yokungenisa umoya, ibhokisi leziphuzo ezibandayo, njll.;Uhlelo lokuphehla amandla avuselelekayo lokukhiqiza i-solar hydrogen kanye ne-fuel cell;Ukunikezwa kwamandla kagesi wemishini yokukhipha usawoti emanzini olwandle;Amasathelayithi, imikhumbi-mkhathi, iziteshi zamandla elanga emkhathini, njll.
Isikhathi sokuthumela: Dec-17-2020
220 Volt Solar Panel Kits, Iphaneli yeSolar Monocristalino, Iphaneli yeSolar Monocristalino 360w, 550w Iphaneli yeSolar, Izindleko Ezimaphakathi Zamaphaneli elanga, 300 Watt Solar Panel,